Ukuqothuka futhi ekucwileni ezikweletini ibhizinisi Lena inqubo eyinkimbinkimbi futhi kabuhlungu. It ihlose hhayi nje kuphela babe ukubuyela okungenani ingxenye yesikweletu esikhulu ukuba izisebenzi zayo nabantu abakweletwayo, kodwa futhi iqiniso ukuze inhlangano ukuqhubeka nemisebenzi yayo naphezu kwezimo ezinzima zamanje.
Ngesikhathi esifanayo, uma ngongakwazi ukukhokha izikweletu yenkampani sisuke kancane ejwayele ngaphezu kwezinsuku zokugcina engamashumi amabili, ucabanga SP namanje kuphakamisa imibuzo. Le nqubo inezici ayo ethize futhi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Okokuqala, kufanele kuphawulwe ukuthi iyiphi usomabhizinisi ngamunye ubhekwa ngokuyinhloko njengomuntu isakhamuzi eRussia, ngakho maqondana naye amalungiselelo ngempela esebenzayo ye Ukuqothuka yezakhamuzi Russian. Nokho, le mpi yomthetho ukuthi ucabanga of isakhamuzi ku imingcele we Russian Federation uye azikakwazi detalizovannye yimuphi umthetho. Ngakho-ke, le-IP kuphela okwamanje esigabeni sabantu ongokoqobo wasesigodini esingaphandle Russian Federation, okuyiwona kungenzeka khona waqala ibhizinisi ngongakwazi ukukhokha izikweletu.
SP ucabanga iqala nokufakwa isicelo ukuhluleka kwawo ukulamula umbango. Lolu hlelo lokusebenza ingagcinwa noma nge okweletayo yena noma omunye abakweletwayo salo, esiwulwazi kukodwa lebhizinisi. Ngesikhathi esifanayo ngokuhamba kwesivivinyo isicelo ohambelana angasebenza futhi labo abamagama izimangalo zihlobene nobuhlobo babo bomuntu mathupha usomabhizinisi.
Ngemva kokucubungula zonke izimo icala, inkantolo arbitral uyothatha isinqumo on the semthethweni ekuqaleni inqubo isakhamuzi. Ukuqothuka IP iba Eqinisweni zomthetho. Khona-ke ngokuzenzakalelayo iyeke usebenze ukubhaliswa kwaso isimo ilungelo ukuzibandakanya kumsebenzi ebhizinisi, bese beyeka umsebenzi wabo wonke amalayisensi kanye nezitifiketi. Ngokusho imithetho jikelele umthetho Russian kuvinjelwe kabusha le isakhamuzi IP elivumelekile unyaka owodwa ngemuva kwekutsatfwa kwesincumo kwesihlalo sokwahlulela arbitral isibe Eqinisweni zomthetho.
Isici ebalulekile inqubo ucabanga SP kusukela izinyathelo ezifanayo esetshenziswa izinhlangano ezingokomthetho, ukuthi akunakwenzeka ukuba zisebenze izinqubo ke ezifana zokuqapha, elawulwa kude futhi yokutakula zezimali. Nokho, uma ucabanga SP iqalwa usomabhizinisi, angakwazi isebenzisa isicelo sakhe uhlelo ukhonkolo lokwehliswa kancane kancane izikweletu zayo.
Ngemva isinqumo ukulamula umbango enkantolo ukuqashelwa yimali, SP, ku yekani yokugcina ukuze qongelele izinhlawulo kanye isithakazelo, kungaba ungesabi lokuthi abakweletwayo kuyoba nzima ukuxhumana naye ukuze akalethanga esikweletini kubo. Nokho, lokhu akusebenzi imisebenzi usomabhizinisi ukukhokha ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso wokugcinwa izingane zabo noma owawushade naye, lapho isinqumo zinkantolo usengenile kakade amandla.
Ukuze akhokhe isikweletu abakweletwayo yayo, usomabhizinisi kuyodingeka ukukhuthaza ukudayiswa impahla, okuyinto, ngokusho enkantolo, likhona izindlu ezikweletini. Kulokhu, oda ukwaneliseka eyasungulwa umthetho.
Kuyini yisiphosiso zokuphatha? FZ-64 "Ngo kokuqondisa nezokuphatha abantu kudedelwa ejele"
Isiphathimandla sobugebengu uSergei Timofeev - Sylvester. Timofeev Sergey Ivanovich: biography
Tincture onsundu: izinkomba ukusetshenziswa futhi indlela kulungiselelwa
Alexei Ivanov, umbhali: Biography, lokusungula
Testament kungenzeka inselele enkantolo?
West Russia: incazelo, amaqiniso athakazelisayo kanye nomlando. AseNtshonalanga naseMpumalanga Russia - Umlando